September 28, 2019 phyo Global News, News 0
File photo - Paris Saint-Germain's Kylian Mbappé and Neymar during the Ligue 1 Paris St-Germain (PSG) v Olympique Lyonnais football match at the Parc des Princes stadium in Paris, France on October 7, 2018. Paris Saint-Germain moved eight points clear at the top of Ligue 1 as Kylian Mbappe scored four goals ina5-0 victory over Lyon. Paris St Germain sporting director Leonardo is prepared to sell Neymar after the Brazil forward failed to report for pre-season training. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM
ချဲလ်ဆီးတိုက်စစ်မှူးဟောင်းဒီဒီယာဒရော့ဘာက ပုံစံကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူး နေမာနဲ့ ဘာပေတို့ဟာ တစ်နေ့မှာ Ballon d’Or ဆုဆွတ်ခူးနိုင်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကစားသမား ၂ ဦးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ကပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် မက်ပီက ၃၃ ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီး နေမာကတော့ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် ၁၇ ပွဲသာပွဲထွက် ကစားခဲ့ရပြီး ၁၅ ဂိုးပဲသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပြည်တွင်းအမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ ၁၆သင်းအဆင့်ကနေပဲ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာပေနဲ့ နေမာတို့ကတော့ စတင်တွဲကစားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီနောက်ပိုင်း နှစ်ဦးပေါင်းပြိုင်ပွဲစုံ ၁၁၅ ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့အထိ ခြေစွမ်းပြလျက်ရှိပါတယ်။
ဒရော့ဘာက “ဟုတ်ပါတယ်၊ နေမာနဲ့ ဘာပေတို့ဟာ တစ်နေ့မှာ Ballon d’Or ဆုရရှိမှာပါ၊ သူတို့ဟာ လူအနည်းငယ်သာရွေးချယ်တဲ့ အဆိုပါ ဆုရနိုင်ခြေရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကစားသမားတွေပါ၊ သူတို့ကကမ္ဘာပေါ်က ကစားသမားတွေထဲမှာ အရမ်းရင်းနှီးပြီး နားလည်မှုရှိတဲ့ ကစားသမားတွေပါ”
”နေမာကနေရာလွတ်တွေ ဖန်တီးပြီး ဘောလုံးကိုဘာပေဆီပေးပို့ပါတယ်၊ ဘာပေက အဲဒီနေရာလွတ်တွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး ဂိုးတွေ ရယူတာပေါ့၊ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက နေမာရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ ဘာပေရဲ့ အသုံးချနိုင်မှုတို့နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတာပါ၊ ဒါကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်”
”သူတို့ အတူတကွ ကစားနေချိန်မှာ ကြည့်ပါ၊ သူတို့က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမြဲကြည့်နေပြီး နားလည်မှုရှိချက်ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Ballon d’Or လောငျးလြာတှအေဖွဈ နမောနဲ့ ဘာပတေို့ကို ဒရော့ဘာသတျမှတျ
ခြဲလျဆီးတိုကျစဈမှူးဟောငျးဒီဒီယာဒရော့ဘာက ပုံစံကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈမှူး နမောနဲ့ ဘာပတေို့ဟာ တဈနမှေ့ာ Ballon d’Or ဆုဆှတျခူးနိုငျမယျလို့ ဟောကိနျးထုတျလိုကျပါတယျ။
အဆိုပါ ကစားသမား ၂ ဦးဟာ လကျရှိအခြိနျမှာပီအကျဈဂြီတိုကျစဈရဲ့ အရေးကွီးတဲ့အခနျးကဏ်ဍတဈရပျကပါဝငျနတော ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပွငျသဈကွယျပှငျ့ မကျပီက ၃၃ ဂိုးသှငျးယူပေးနိုငျခဲ့ပွီး နမောကတော့ ဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့ ၁၇ ပှဲသာပှဲထှကျ ကစားခဲ့ရပွီး ၁၅ ဂိုးပဲသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပီအကျဈဂြီအသငျးလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပွညျတှငျးအမှတျပေးခနျြပီယံဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာတော့ ၁၆သငျးအဆငျ့ကနပေဲ ထှကျခဲ့ရပါတယျ။ ဘာပနေဲ့ နမောတို့ကတော့ စတငျတှဲကစားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီနောကျပိုငျး နှဈဦးပေါငျးပွိုငျပှဲစုံ ၁၁၅ ဂိုးသှငျးယူထားတဲ့အထိ ခွစှေမျးပွလကျြရှိပါတယျ။
ဒရော့ဘာက “ဟုတျပါတယျ၊ နမောနဲ့ ဘာပတေို့ဟာ တဈနမှေ့ာ Ballon d’Or ဆုရရှိမှာပါ၊ သူတို့ဟာ လူအနညျးငယျသာရှေးခယျြတဲ့ အဆိုပါ ဆုရနိုငျခွရှေိတဲ့ ထူးခွားတဲ့ ကစားသမားတှပေါ၊ သူတို့ကကမ်ဘာပျေါက ကစားသမားတှထေဲမှာ အရမျးရငျးနှီးပွီး နားလညျမှုရှိတဲ့ ကစားသမားတှပေါ”
”နမောကနရောလှတျတှေ ဖနျတီးပွီး ဘောလုံးကိုဘာပဆေီပေးပို့ပါတယျ၊ ဘာပကေ အဲဒီနရောလှတျတှကေို ကောငျးကောငျးအသုံးခပြွီး ဂိုးတှေ ရယူတာပေါ့၊ ပီအကျဈဂြီအသငျးက နမောရဲ့ဖနျတီးနိုငျစှမျးနဲ့ ဘာပရေဲ့ အသုံးခနြိုငျမှုတို့နဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိနတောပါ၊ ဒါကအလုပျဖွဈပါတယျ”
”သူတို့ အတူတကှ ကစားနခြေိနျမှာ ကွညျ့ပါ၊ သူတို့က တဈယောကျကိုတဈယောကျ အမွဲကွညျ့နပွေီး နားလညျမှုရှိခကျြကတော့ အံ့မခနျးပါပဲ”လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။